ZUJ: Sisalinde Uphenyo Lwendaba kaPorusingazi
Mfumfu 28, 2013
HARARE — Abenhlanganiso yentathelizindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, bathi basalindele ukugqitshwa komsebenzi wokucubungula anduba bangenele njengenhlanganiso edabeni lwentathelizindaba ezintathu zeMutare ezetheswa umlandu wokuphathisa ummeli we Chipinge South edale lephalamende, umnumzana Enock Porusingazi, ekuhlukuluzweni kwentathelizindaba yesifazana efundela umsebenzi.
Lokhu kuza ngemva kokuba intathelizindaba ezimbili ezisebenzela iphephandaba le Manica Post, uRay Bande lo Tinaye Nyadzawo,ongunobhala jikelele walapho okuhlangana khona intathelizindaba i Press Club yeMutare, beqile uMercy Ngwebvu,osafundela ukuba yintathelizindaba e Harare Polytechnical College, bamusa emahofisini ka Porusingazi asendaweni yamabhizimusi eChecheche e Chipinge lapho lapho abikwa ehlukuluzwe ngoba engowesifazana.
Intathelizindaba ye Zimbabwe Broadcasting Corporation, ethatha imifanekiso kamabonakude onguyena mgcinisihlalo njalo omela isigaba seMutare kuZUJ uOliver Karuru laye ubikwa ephatheke kulesi sehlakalo sokuqila uMercy.
Unobhala jikelele weZUJ umnumzana Foster Dongosi, uveze ukuba sebewutholile umbiko kodwa bangeke bangenela okwamanje kuloludaba oseluphume kumaphendaba.
UDongosi wengezelele ethi basalindele ukugqitshwa kokuhluzwa kwaloludaba lapho okusebenza lezintathelizindaba ze Manica Post, kulandelwa imithetho yalenkampani phezu kwendlela izisebenzi okumele ziziphathe ngayo emsebenzini i code of conduct anduba balungenele udaba.
U Dongosi wengeze ethi inhlanganiso yakhe kayiphathwanga kuhle ngalokho okwenzakalayo,nxa kuliqiniso njengoba abeZUJ njengenhlanganiso behlezi bekhankasela ukuqedwa kwendaba zaloluhlobo emisebenzini lakumankampani lapho intathelizindaba ikakhulu ezesifazane zisebenza khona olwe sexual harassment.
Lokhu kwenza kwalezintathelizindaba kubikwa sekubangele ukuba umqondisi we Zimpapers umnumzana Justice Mutasa kanye lomhleli omkhulu u-Editor in Chief, enkampanini le, umnumzana Pikirayi Deketeke, befuna incazelo egcweleyo phezu kokwenzakeleyo kumhleli omkhulu we Manica Post , u Hatred Zenega.
Kodwa u Porusingazi uyakulandula okuphume kumaphephandaba lanxa evuma ukuba unikeze intathelizindaba zesilisa imali ngemva kokubanxunsa emahofisini akhe. I Studio Seven ayanelisanga ukukhuluma loPorusingazi ngaloludaba.